यस्तो छ प्याजको टुक्रा कानमा राखेर सुत्नुको फाइदा ! एक रातमै दिनेछ चमत्कारीक नतिजा ! – Medianp
यस्तो छ प्याजको टुक्रा कानमा राखेर सुत्नुको फाइदा ! एक रातमै दिनेछ चमत्कारीक नतिजा !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २१, २०७५१५:३८0
काठमाडौँ,२१ असोज । विशेष गरेर तरकारीमा प्रयोग गरिने प्याज निकै फाइदाजनक रहेको छ । तरकारीमा मिठो स्वाद दिने भएकाले प्याजलाई हरेक दिन सबैको भान्सामा अनिवार्य रुपमा प्याजको प्याजले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने भएकाले प्याज मात्र खाने गरिन्छ । यति मात्र हैन् प्याजले रोगका किटाणुहरु समेत मार्ने काम गर्छ ।
प्याजमा भरपूर मात्रामा फस्फोरिक एसिड हुने भएकाले धमनीमा गएर रगत शुद्ध पार्ने गर्छ । प्याजलाई खुट्टाको पैतालामा प्रयोग गर्यो भने शक्ति दिने गर्छ । प्याजले शरिरको विभिन्न भागमा प्रयोग गर्ने थुप्रै फाइदाहरु दिने गर्छ । नाङ्गै खुट्टाले घन्टौ सम्म हिड्नेको लागि निकै फाइदाजनक रहेको छ । प्याजको प्रयोगले ज्वरो आउने, रुघा खोकी लाग्ने, स्वाइन फ्लू, जस्ता धेरै रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्दछ । प्याजले शरिरमा धेरै किसिमका पोशाक तत्व र रसायनहरु प्राप्त हुन्छ ।
कुनै पनि कुराहरु सुघ्ने, शरिरमा लगाउने गर्दा यसको रसायन हरु शरिरमा प्रयोग गर्ने गर्छ । जस्तै कुनै पनि कुराको वास्ना लिदा मतिष्कमा तुरुन्तै परिवर्तन आउँछ । आज हामी तपाईहरुलाई प्याजको टुक्रा कानमा प्रयोेग गर्दा हुने अचुक फाइदाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । यदि तपाई कान दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् ।
राती सुत्ने बेलमा प्याजको भित्री भागको एक टुक्रा कानमा राखेर सुत्नुहोस् बिहान उठ्दा पाउनुहुनेछ चमत्कारीक नतिजा जसले तपाइको समस्या हल भएको हुनेछ छ । यसरी प्याजको प्रयोगले तपाईको शरिरमा भएका हरेक दुखाइका समस्याहरु हटेर जानेछन् । प्याजमा भएको एक प्रकारको एसिडले शरिरमा भएका थुप्रै समस्याबाट मुक्ति दिन्छ ।
तीनसय किलोको खशी बजारमा बेच्न ल्याएपछि हेर्नेको भिड (भिडियो)
सन्दिप लामिछाने चम्किए पछि नेपाल सामू छिट्टै घुँडा टेक्यो थाइल्यान्ड ! फेरी नेपाल कै जीत